Programs | JP Adult Learning Program | Boston
-HiSET / GED Diyaarinta
Bishii Janaayo 2014 imtixaanka HiSET wuxuu kugu badalay GED Massachusetts markii aad heshay aqoonsi dugsi sare, oo ay aqbaleen ku dhawaad ​​loo shaqeeyayaasha Mareykanka, kulliyadaha iyo jaamacadaha. Ardayda waxaa la baraa dhammaan maadooyinka: Akhriska, Qorista, Xisaabta, sayniska, iyo cilmiga bulshada. Ardaydu sidoo kale waxay bartaan xirfadaha kale ee muhiimka ah ee waxbarasho iyo xirfadeed sida xalinta dhibaatada iyo habeynta macluumaadka.
(Isniinta, Talaadada, Arbacada, Khamiista)
-ESOL - Ingiriisiga loogu talagalay ku hadla Afafka Kale
Dhammaan dhinacyada Ingiriisiga waxaa la bartaa: dhageysiga, hadalka, aqrinta, qorista, ereyada cusub, ku dhawaaqida iyo naxwaha. Ardeydu waxay bartaan inay si wanaagsan ula xiriiraan loo shaqeeyaha, dhakhaatiirta, carruurtooda iyo macallimiinta carruurtooda, sidaa darteed waxay ku sii noqonayaan madax-bannaannaan waddanka Mareykanka.
(Isniin, Talaado, Arbaco)
(Talaado, Arbaco, Khamiis)
-College Wadooyinka Diyaargarowga iyo Xirfadaha
Wax kasta oo aad u baahan tahay si aad ugu diyaar garowdid kulleejyada iyo shaqooyinka, adoo adeegsanaya hagitaan ah qaabab internetka sida 'ACT Career Ready 101' si aad ugu sahamiso xirfadaha, xirfadahooga xirfadeed, waxbarasho-warshadeed gaar ah, teknoloji, waxbarasho, waqti iyo xirfadaha maaraynta maaliyadeed. Gargaar dheeri ah oo la xiriira codsiyada gargaarka maaliyadeed. Baro sida loogu diyaargaroobo shaqooyinka baahida-badan ee warshadaha koritaanka maanta.
(Isniinta iyo ballanta)
Haddii aad leedahay jadwal mashquul ah, iska qor barnaamijkeena barashada masaafada tooska ah ee internetka si aad ugu hormariso xirfadahaaga aqooneed adigoon guriga ka tegin, Waxaad ku sameyneysaa casharrada kombiyuutarkaaga (ama maktabadda) xawaarahaaga iyo jadwalkaaga. Macalinku wuxuu kugula shaqeynayaa khadka internetka, emaylka, taleefanka, iyo tababarka macalimiinta ee waji ka waji ee iskuulka
Dhammaan tilmaamaha barashada masaafada iyo alaabada waxaa lagu bixiyaa khadka tooska ah.